I-Cape Town City ayizimisele ukudayisa u-Kermit Erasmus
UKERMIT Erasmus ongumgadli weCape Town City usefomini enhle kule sizini ye-Absa Premiership esizosongwa Isithombe: BACKPAGEPIX
minenhle mkhize | June 30, 2020
ICAPE Town City isiphumele obala yacacisa ukuthi ayimdayisi umgadli wayo uKermit Erasmus.
Lo mdlali obuye agijime kwiBafana Bafana uhlohla amagoli kwiCitizens kule sizini okulindeleke ukuthi isongwe maduze nje. Kuvela ukuthi ufunwa uthuli ompetha be-Absa Premiership iMamelodi Sundowns.
Ekhuluma ne-Independent Media usihlalo weCity, uJohn Comitis, uthe akazimisele ukudayisa abadlali bakhe abamqoka okubalwa no-Erasmus.
“Cha, akukho okwenzekayo. Akekho umdlali ohambayo. Azikho izingxoxo mayelana nomdlali ohambayo. Sizobagcina abadlali bethu abamqoka ukuze sincintisane kahle,” kuchaza uComitis.
U-Erasmus uzohlanganisa iminyaka ewu-30 ngenyanga ezoqala. Ujoyine iCity ngonyaka odlule ngemuva kokuthi qu ePortugal. Lo mgadli usebuyelwe yifomu yakhe aziwa ngayo. Kumiswe imidlalo yePremier Soccer League (PSL) ifomu yakhe inkulu kakhulu.
“Uma nje ngisenabadlali abawu-11 abangangiwinela izinto, ngijabulile. Abadlali ababizayo kodwa abangenzi kahle futhi abengekho eqenjini, sizobona ukuthi senzenjani ngabo. Ekugcineni wonke umuntu kumele abhukule,” kusho uComitis.
UThamsanqa Mkhize naye umataniswa nneSundowns kodwa uComitis akayingeni leyo.
Umqeqeshi onamava, uGavin Hunt, uzophelelwa umsebenzi ekupheleni kwesizini ngemuva kokuthi iBidvest Wits iqinisekise ukuthi isidayise isitifiketi sayo sokudlala kwiPSL kwiTshakhuma Tsha Madzivhandala yaseLimpopo.
Abaphathi beTshakhuma sebeshilo ukuthi abakwazi ukukhokhela uHunt. Lokhu sekwenze ukuthi amataniswe neCity neKaizer Chiefs kodwa uComitis ukuchithile ukuthi angase asayinise lo mqeqeshi.
“Nginomqeqeshi onenkontileka yeminyaka emithathu. Ngeneme kakhuluu ngomqeqeshi wami,” kuchaza uComitis.
ICity iqasha abaqeqeshi abaphezulu selokhu yasungulwa. Seyike yaqeqeshwa ngu-Eric Tinkler noBenni McCarthy, abake bayibamba kwiBafana Bafana. Bobabili benze kahle kwiCitizens. UMcCarthy uphakamise indebe yeMTN 8 kanti uTinkler udle iTelkom Knockout. Ngesikhathi iCity iqasha uTinkler yake yaba nenhlolokhono noRuud Krol owake waqeqesha i-Orlando Pirates.
UHunt ungomunye wabaqeqeshi abahlonishwayo ebholeni eNingizimu Afrika. Usewine izicoco kuwo wonke amaqembu ake wawaqeqesha.